Ny fomba hiterahana Bergenia, ny tsiambaratelon'ny fambolena sy fikarakarana voninkazo - Zavamaniry zavamaniry mihamitombo - 2019
Ny fotoana sy ny fomba hambolena hazo, ny fitsipiky ny fikarakarana voninkazo
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo momba ny vahaolana tahaka an'i Badan izahay. Ho fantatrao ny toetran'i Badan, ary koa mahazo vaovao momba ny fambolena sy fikarakarana azy eny an-tsena. Ankoatra izany, dia tsy hiraharaha ireo karazam-pambolena amin'ny zavamaniry voatondro, ny fitsipika momba ny fandroahana sy ny fikarakarana azy.
Fantatrao ve? Ny vokatry ny fitsaboana natao noho ny bergenia, dia manana hemostatic, antimicrobial ary manohitra ny atidoha.
Fomba telo hanamboarana bergenia
Ny fomba hikarakarana voninkazo iray
Inona no tokony ho ny tany, na hamahana ilay orinasa
Ny aretina sy ny bibikely ratsy
Ny fotoana tsara indrindra sy ny toerana hambolena bergenia
Ao amin'ity fizarana ity dia handinika ireo toerana tsara indrindra hambolena ny bergenia isika, ary koa ny miezaka mamantatra ny fotoana hanamboarana ny zavamaniry.
Badan (na Mongoliana) - Ity dia zavamaniry matavy be karama. Ao Eoropa, ampiasaina amin'ny tanjona amin'ny endriny, ary ao Altai - amin'ny endrika dite (banyan antsoina hoe "Chigir tea" eo). Amin'ny zavaboahary dia mahazatra any Azia Afovoany ity zavamaniry ity, ary noho izany dia tsy maintsy ilaina ny fepetra hahazoana ny fivoarany.
Ny voninkazo badan dia tokony hamboly amin'ny fiandohan'ny lohataona mba ho lasa matanjaka mandritra ny lohataona ary afaka mamindra soa aman-tsara ny savorovoro rehetra sy ny aretina.
Rehefa mamboly maharitra dia mila mifidy ny toerana mety ianao. Ny Badan dia tsy mahatsapa ho mendrika loatra amin'ny masoandro, noho izany, ny safidy tsara indrindra ho an'ny fambolena dia toerana iray izay nipetrahan'ny taratra masoandro ny kitay raha tsy amin'ny maraina sy hariva.
Noho izany, ao amin'ny masoandro ny zavamaniry dia ao anatin'ny penina maoderina. Rehefa mamboly alokaloka tanteraka i Badan dia afaka mitsahatra ny mamony!
Zava-dehibe izany! Rehefa mamboly masoandro ianao, dia mila manara-maso amim-pitandremana ny fahosan'ny tany ary matetika mamafy ilay zavamaniry.
Ny toerana sy ny fotoana hambolena dia nofinidy, ankehitriny dia mendrika ny hikaroka amin'ny alalan'ny hoe inona no ampiasain'ny plant bergenia eny amin'ny tany malalaka.
Bergenia fototra Azo afafina amin'ny fomba telo:
fambolena rosettes ravina;
miala amin'ny fitoeran-drano;
Amin'ny tranga voalohany, ny rhizome dia nokarohina tsara (tsy mila miezaka manasaraka ny fakan-kazo avy amin'ny tany) ary navadika ho toerana vaovao. Azonao atao ny manatanteraka ny dingana na dia efa nipoitra aza ny zavamaniry.
Ity safidy ity no tsara indrindra, satria ahafahana mamerina ny zavamaniry manerana ny vanin-taona miposaka. Na izany aza, ny fitrandrahana dia tsara indrindra amin'ny fahalavoana.
Zava-dehibe izany! Tsy azo tanterahina mandritra ny voninkazo ny fanangonam-bokatra.
Amin'ny endritsy faharoa dia ampiasaina ny zana-ketsa izay mitsimoka ao anaty fitoeran-drano. Ny fitaterana dia tanterahana amin'ny lohataona, mamoaka ny fakany miaraka amin'ny fehikibo eto an-tany ary mamboly azy amin'ny tany. Raha efa nitombo be ny zavamaniry dia afaka manapaka kely ny fakany.
Ny safidy fahatelo dia ny fambolena faka miaraka amin'ny bozaka mangatsiaka. Mba hanaovana izany, dia omeo ny ampahany amin'ny fotony amin'ny tsimokaretina 5-6. Alohan'ny hambolena amin'ny tany dia mila mihazona ny rhizome amin'ny rano mandritra ny 2-3 ora. Ankoatra izany, amin'ity endriny ity dia afaka mitahiry sy mitondra ny fakany. Mba hanaovana izany, dia rakotry ny mololo izy ireo ary mihosotra kely.
Zava-dehibe izany! Tsy tokony havela haitraitra avo be ny fikojakojana ny rhizomia, raha tsy izany dia mety ho lany ny fakany.
Badan, tahaka ny zavamaniry rehetra, mitaky fikarakarana kely. Noho izany dia holazainay aminao ny fomba hanarahana azy io mba hahafaly anao amin'ny endrika ivelany sy ny voninkazo.
Badan - zavamaniry tsy mendrika Noho izany, tokony hohadinoina ireo lafiny maro izay tena manan-danja indrindra:
Tsy tokony havela hivoaka ny tany;
Tsy tokony hiorim-ponenana ny zavamaniry eo ambanin'ilay zavamaniry;
Tsy vitanao matetika ny manao transplants.
Raha misy rano eo ambanin'ny zavamaniry, dia ho maimbo haingana izy. Mba hisorohana an'izany, mila mandeha tsikelikely ianao, fa matetika no manondraka ilay zavamaniry, na mamafy izany amin'ny tany miaraka amin'ny fananana drafitra tsara.
Ny tany dia fotodrafitrasa izay itehirizana ny zavamaniry sy avy amin'ireo izay mahasalama. Noho izany, miankina betsaka amin'ny tany ny ankamaroany.
Ny karazana Badana rehetra dia tia ny tany, ny sida dia mihena ho zero. Ny vahaolana momba ny tany manana dobo fantsona tsara dia ity manaraka ity: Fasika 2, ampahany kely amin'ny tany lava ary vato kely vitsy.
Raha manana tany loamy ianao dia ataovy compost, fasika ary humus. Ity safidy ity dia azo ekena amin'ny zavamaniry.
Raha liana ianao, mihoatra ny lohataona badan, ny valiny dia ny manaraka - tsy misy. Ny akanjo ambony momba ny bergenia dia tsy aseho raha tsy mibontsina amin'ny endriky ny vongan-dranomamy tsy mety.
Raha ny marina, ny zavamaniry dia afaka manao tsy ampiasaina fanampiny, raha ny marina, raha ampy sakafo ny tany. Ilaina ny mahafantatra fa ny fampiharana sakafo fanampiny amin'ny fotoana hafa dia valiny hafa amin'ny fanontaniana hoe "Nahoana no tsy mamony ny badana?".
Ny ravina fingotra dia tsy atao afa-tsy rehefa voapetraka ao amin'ny toerana iray ny zavamaniry misy anao ary ny ravina maizimaizina dia manimba ny endrika ivelany.
Fa! Amin'ity tranga ity dia mila manamboatra fantsona ianao.
Ilaina ny mitadidy fa ny ravinkazo lava dia toy ny zavamaniry ho an'ny fiarovana fanampiny avy amin'ny ranomandry, noho izany dia tsara kokoa ny tsy manala azy ireo eny ambanivohitra.
Ankehitriny fantatrao fa tsy mavesatra ny fikarakarana ny badan, fa ny fitsipika fototra kosa dia tokony arahina.
Efa nodinihintsika ny safidy hambolena ny bergenia, mitombo sy mikarakara izany, ankehitriny dia tokony handeha amin'ny famokarana an'io zavamaniry io isika. Misy safidy roa karazana:
Iza amin'izy ireo no tsara kokoa sy mora kokoa - manapa-kevitra ianao, ary amin'izao fotoana izao dia handinika ireo safidy roa.
Ny fampielezana ny voa dia antsoina hoe generative, fa ireto angovo kely kely ireto Tsy azo alaina eny amin'ny tany malalaka. Rehefa avy nipoitra kely ny masomboly (tokony ho 2 mm) dia tokony hangonina sy hambolena ao anaty fitoeran-drano kely izy ireo.
Ho an'ny fianarana tsaratsara kokoa, ny voa dia napetraka amin'ny vahaolana amin'ny fungicide, izay manatanteraka asa roa avy hatrany: manasitrana sy manamora ny fikajiana. Rehefa avy nambolena ireo voa, ilaina ny mihazona ny fahosan'ny landy ambany, ary rehefa mipoitra maitso mavana na fanaka hafa dia tokony hovahana ny tany.
Amin'ny fikarakarana sahaza, dia afaka manangona zana-ketsa maro avy amin'ny voa. Rehefa tonga 12-15 cm ny haben'ny tifitra, dia navadika ho tany malalaka. Ny tsy fahampian'ny fitomboan'ny bergenia avy amin'ny voa dia ny fiterahana tsy mitsaha-mitombo (ny tanora dia manomboka maniry raha tsy 2 taona).
Ankoatra izany, tokony hotsaroanao fa tena be ny orana nambolena tany amin'ny tany malalaka tsy misy transplante. Noho izany, ilaina ny manatanteraka izany asa izany tsy indray mandeha isan-taona.
Ny fandrosoana amin'ny tavy dia antsoina hoe vegetatif. Ity dia fomba mora kokoa sy haingana kokoa hanamboarana ny badan.
Amin'io fomba io dia ampiasaina ireo rhizome tanora, izay mizara haingana kokoa, dia tafaverina amin'ny laoniny, ary mamaka tsara kokoa. Rehefa mibotaba dia tapaka ny ampahany amin'ny fotony, mamela ravina 2-3 (na 5-6) eo aminy. Ny halavan'ny fangorahana dia 4-5 cm, izay tsy tokony ho mihoatra.
Rehefa mamboly zavamaniry maromaro indray mandeha dia ilaina ny manavaka ny elanelan'ny 40-50 cm eo anelanelan'izy ireo, mba tsy hanimba ny fakan'ny "mpifanolobodirindrina" mandritra ny fisarahana. Ny kirihitra Bergenia dia zara raha indray mandeha isaky ny 5 taona.
Fantatrao ve? Ny fitsaboana nentim-paharazana dia mampiasa beranne ho fitsaboana ny raboka, rheomatisma ary aretina ao amin'ny taratasy mivalona. Ao amin'ny fanafody Mongoliana dia ampiasaina ho fanafody ho an'ny menaka sy ny fery.
Ny Badan dia tsy voakasika amin'ny bibikely, satria misy singa simika miavaka izay mampatahotra azy ireo.
Ny bibikely lehibe dia poblika pennica (amin'ny teny hafa, cicada slobbering) ary ny nematode.
Misy areti-mandringana, matetika, amin'ny zavamaniry nambolena tao anaty alokaloka, tao amin'ny tany manitra mahery.
Ny singa fototra amin'ny cycada dia ny tsiranoka miafina, izay toy ny menaka. Ao anatin'izany dia maniry ny lavenona pennitsa, izay miakatra any koa. Rehefa miaro ny simika dia miaro ny lavenona amin'ny alàlan'ny voka-dratsy ny foibeny.
Mba hanesorana ireo pennits ao amin'ny zaridao, mila mampiasa faran'izay simika manokana (ohatra, Tsvetofos sy Intavir), ary ny fampiasana "fomba efa tranainy" dia tsy miasa.
Zava-dehibe izany! Ny fitsaboana simika dia tokony hatsangana rehefa avy nodorana.
Ny nematodes dia kankana boribory izay miaina anaty tany akaikin'ny fakany. Raha mihamaro ny nematode, dia saika tsy voavonjy ny zavamaniry.
Ny mahazatra ny nematodes dia ny loko misy endrika tsy mahazatra. Ny kankana dia miteraka amin'ny endriky ny baolina izay mifikitra amin'ny fakan'ny zavamaniry iray.
Rehefa mamindra ny bergenia ianao dia tokony hokarakaraina amin'ny simika ny tranokala avy amin'ny fambolena farany ary tsy nambolena nandritra ny herintaona mahery.
Badan dia mety "marary" ihany koa amin'ny ravina ravina. Amin'io tranga io, ny ravin'io zavamaniry io dia rakotra tsaramaso maizina, izay, rehefa mandeha ny fotoana, dia lasa fotsy volomparasy.
Ny ravin-damosin'ny ravina dia misy fotony fotsy. Io angadin'omby io dia mangatsiaka. Ny fanavahana ny aretina dia mety amin'ny ampahany amin'ny voany. Azonao ampiasaina ihany koa Bordeaux fluid.
Badan dia manohitra ny aretina rehetra, noho izany dia tsy mila fitsaboana fanampiny izy.
Nambaranay ny momba ny zavamaniry antsoina hoe "Badan". Afaka mamolavola azy ao amin'ny saha misy anao ianao, ary amin'ny fikarakarana tsara, dia hankafizinao amin'ny voninkazo mavokely mahafinaritra isan-taona.
Ankoatra izany, raha fantatrao momba ny voka-dratsin'ny zavamaniry ianao, dia afaka manampy ny voninkazo amin'ny fitsaboana hafa.
Inona no atodin'ny vorona guinea?
Fanopy maso ho an'ny atody Covatutto 108
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny fotoana sy ny fomba hambolena hazo, ny fitsipiky ny fikarakarana voninkazo